Madaxweynihii xilka laga tuuray Cali Cosoble oo Muqdisho soo gaaray (Daawo Sawirada) – dulmidiid
Madaxweynihii xilka laga tuuray Cali Cosoble oo Muqdisho soo gaaray (Daawo Sawirada)
Waxaa magaalada Muqdisho maanta soo gaaray Madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabelle Cali Cabdulaahi Cosoble, oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada Jowhar kana waday dagaal siyaasadeed.
Cali Cosoble oo u muuqda mid rajadiisa ceel dheer ku dhacday ayaa magaalada Muqdisho u yimid sidii uu ula kulmi lahaa wakiilo katirsan Beesha Caalamka oo degan xarunta Xalane, waxa uuna doonayaa in uu u gudbiyo cabasho uu ka qabo xil ka qaadista lagu sameeyay.
Madaxweynihii hore ee Hirshabelle ayaa sidoo kale magaalada Muqdisho kula kulmi doona qaar kamid ah Madaxda sare ee dowlada Federaalka Somalia, waxa uu sidoo kale Cosoble la kulmi doonaa Xildhibaanada iyo siyaasiyiinta beeshiisa kasoo jeeda ee taageersan.
Waxa uu wali ku adkeesanayaa Cali Cosoble in uu yahay Madaxweynaha maamulka Hirshabelle, waxa uuna ku eedeeyay Xukuumada Soomaaliya in ay masuul ka aheed xil ka qaadistii lagu sameeyay ayna dhaqaalo ku bixisay.
Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa wafdi Wasiiro ah u dirtay magaalada Jowhar kuwaa oo kulamo la qaatay Gudoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle iyo sidoo kale Madaxweynaha xilka laga tuuray ee Cali Cabdulaahi Cosoble.
Wali dowlada Federaalka Soomaaliya ma aysan cadeyn go’aankeeda ku aadan xil ka qaadistii lagu sameeyay Madaxweynaha Hirshabelle, waxaana jira shaki ku aadan in dowlada ay wax ka ogeyd qorshaha xilka looga tuuray Cali Cabdulaahi Cosoble.